We She Me: VOA နှင့် အင်တာဗျူး
VOA နှင့် အင်တာဗျူး
Voice Of America (VOA) မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ “ဘလော့ဂါတွေ ပြောသမျှ” ကဏ္ဍမှာ We She Me ဘလော့ အကြောင်း အင်တာဗျူး အတိုလေး ထုတ်လွှင့်ထားတာ နားဆင်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာပါ။ MP3 ဖိုင်ကိုတော့ ဒီမှာ download လုပ်လို့ရပါတယ်။ အလုပ်ထဲက ကွန်ပြူတာမှာ ကျွန်တော့် အသံကြီး ထွက်လာလို့ အနားကလူတွေ ဘုကြည့်ကြည့်ရင်တော့ တာဝန်မယူပါဘူး :-)
nyimuyar - 4/6/09, 2:10 PM
ကိုအန်ဒီ ရေ နားထောင် လိုက်ပါပြီဗျာ။ ကျနော်တို့ လည်း ယူ ထဲမှာ ပါနေမှာပါပဲဗျ နော့။ ဘယ်လို ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စာရေးသူ ဘလော့ဂါ ရဲ့ဝေမျှပေးတဲ့ စေတနာတွေကို လေးစား ခံယူလျှက်ပါဗျာ။
shin - 4/6/09, 3:10 PM
Congratulation... Ko Andy....Your blog isamust everyday visit for me as well...
ZT - 4/6/09, 3:20 PM
ကိုအင်န်ဒီ ရဲ့ အသံ ကြားဖူးသွားတာပေါ့။ :)
Phyo Maw - 4/6/09, 3:59 PM
ဟဲဟဲ ကို ME from WE SHE ME အသံပါကြားနေရပြီ။
နောက်ဆို သရုပ်ဆောင် လွင်မိုးလို ဗီဒီယိုနှင့်တကွ လာတော့မည် ထင်သည်။
သဉ္ဇာ - Thinzar - 4/6/09, 4:22 PM
she က အဲလောက် အများကြီး ရည်ညွှန်းမှန်း ခုမှသိတယ်။ အစက 'သူမ' တစ်ယောက်တည်းလို့ ထင်တာ။ :-) [ရေဒီယိုကနေ ဖြေရင် "xxxပေါ့နော်.. xxx ပေါ့နော်" ဆိုတာ မပါဘဲ မနေဘူးဆိုတာတော့ အမှန်ဘဲ။ ကိုအန်ဒီကိုဘဲ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ မြန်မာဝါကျ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ အဆုံးသတ် တစ်ခုပေါ့နော်။]
Ko Paw - 4/6/09, 6:13 PM
အသံချည်းနားထောင်ရင် တော်တော်ငယ်သလိုပဲ။ မသိရင် အခုမှ ကျောင်းပြီးကာစ လူငယ်လေးတယောက်နဲ့ ဗျူးနေသလို ထင်ရတယ်။း-)
သန္တာ - 4/6/09, 6:52 PM
တခါမှမရေးဘူးပေမယ့် အခုတော့ဝင်ရေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ ဘလော့လေးတစ်ခုပါပဲ..။
ဇနိ - 4/6/09, 7:35 PM
ကိုအန်ဒီ အသံနဲ့ အမအသံကို ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေထဲမှာ ကြားဖူးထားတယ်း)
အောင်မြင်မှုတွေ တသီကြီးနဲ့ ပျော်စရာကြီးပါ၊ ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုအန်ဒီ
sin dan lar - 4/6/09, 7:59 PM
အသံကပါ ခန့်နေပါလား... :P:P:P
Taungoo - 4/6/09, 11:16 PM
Hits ကတော့ ထပ်တက်ဦးမှာ သေချာတယ်း)
MrDBA - 4/6/09, 11:47 PM
အသံကြားဖူးသွားပြီ။ ဂုဏ်ပြုပါတယ် ကိုအန်ဒီရေ။ ဝမ်းသာလိုက်တာ။
ရဲရင့်တေဇ - 4/7/09, 1:34 AM
ကိုအန်ဒီလိုလည်း ဘလော့ရေးချင်တယ်။ မိသားစု တွေအတွက်ရေးချင်တာပါ။ ကိုယ့်မိသားစုတွေအကြောင်းကိုအမှတ်တရရေး
Thant - 4/7/09, 1:00 PM
နားထောင်ပြီးပါပြီရှင်.... Cheers !!!
ကြည် - 4/7/09, 1:27 PM
အသံကြားဖူးသွားပြီ..စိုင်းစိုင်းအင်န်ဒီ ဆိုပြီးခွေထုတ်ရင်တော့ အဆိုတော်တွေထိုင်ငိုရမဲ့ ကိန်းပဲ။ အသံက စိုင်းစိုင်းထက်သာတယ်ဗျား။ ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်..အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုမျှဝေပေးနိုင်ပါစေပေါ့နော်။:P
ZIN MINN - 4/7/09, 7:22 PM
Your family life is same to me, so i ready everyday your blog, even i've no time, i loose my sleep time to read your blog, and your interview.
Congratulation to you and your family.
Phyo Evergreen - 4/7/09, 10:02 PM
Celebrity Blogger ဖြစ်နေပြီ.. နောက်ထပ်ဟင်းထပ်ချက်ကျွေး.. လာချားမယ်..ဟိဟိ။ အသံကငယ်သလိုဘဲ..အသက်ငယ်သေးတယ်ထင်တယ် ကိုအန်ဒီ.။
Anonymous - 4/8/09, 9:24 PM
I noticed one thing, you chose the refresh count for the Hits, so that me alone gave you more than 10 hits count bcoz I read the comments and went back to main page that also keep adding hits counts. :)
If you don't believe in my comment, you also can check it out in your hit count settings. There are two options.
Anyway, you areagood blogger ...
And we all are looking forwards to your friendly posts.
Andy Myint - 4/8/09, 9:41 PM
That's right, Bro. Thanks for pointing this out. That's why I mentioned it "hits" not "visitors" count. You can also say this is page load count.
khin oo may - 4/9/09, 1:03 AM
မီန်းကလေး အသံက နဲနဲ မြန်နေတယ်။ နဲနဲ အသံလည်း ကျယ်တယ်။ လျော့ပေးစေချင်တယ။် စာသားဖတ်သလို နဲနဲ ဆန်တယ်။
ယောကျာ်းလေးအသံက ပိုကောင်းတယ်။ ပိုတည်ငြိမ်တယ်။
ကိုအန်ဒီ။ အသံကတော့ငယ်ပါတယ။် နော်များသွားတယ။် အဲဒါဆို ဘယ်လိုပြောရမလဲ မမေးပါနဲ့ ကိုယ်လဲ မသိဘူး။ နောက်တစ်ခါ လျော့ပါ့။
အသံနားထောင်ရတာတော့ကောင်းပါတယ။် စာသားလေးတွေ ပါ ချရေး ထားရင် စာဖတ်သူအတွက် အမှတ်တစ်ရကလေးတွေ ဖြစ်သွားမှာမို့လို့ ရေးပေးစေချင်။ နောက်တစ်ခု download ရခက်တဲ့သူအတွက်တွေလေး အဆင်ပြေ နိုင်မှာပါ။
မြူးသျှရီ - 4/9/09, 1:07 AM
တောင်ပေါ်သား - 4/9/09, 4:17 PM
ကိုဇေယျာ - 4/14/09, 10:44 PM
ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုအင်ဒီ !!
▼ April ( 7)
သမီးလေး ဆွဲတဲ့ ပန်းချီ
သားနဲ့ သမီးရဲ့ မတိုးတက်မှု